Orinasa fanongotam-bolo - Sina Mpanala ny volo, mpamatsy
1200W 755 + 808 + 1064nm laser fanesorana volo
HIDL-808-2000 dia mampiasa laser laser diode lava-pahefana 808nm mahery, izay afaka manao ny fitsaboana ny fanesorana volo ho an'ny karazana hoditra sy ny karazan-bolo rehetra. Ao amin'ny tanany, misy bara laser 20 pcs, mampiasa bara laser US Coherent izy. Ny halavan'ny fiainana dia tsy misy fetra fitifirana, azonao atao ny mampiasa azy amin'ny fotoana rehetra. Ao amin'ny sangan'asa, misy efijery LCD, afaka mampiseho ny angovo sy ny fahita matetika, mora kokoa ho an'ny mpandraharaha manao fitsaboana.
HIDL-808-2000 dia mampiasa ny laser diode 808nm, atambatra amin'ny lohan'ny fitsaboana mahery vaika 2000W. Izay afaka manao ny fitsaboana ny fanesorana volo ho an'ny karazana hoditra sy ny karazam-bolo amin'ny fomba mahomby. Ka ity milina ity dia malaza any amin'ny tobim-pitsaboana volo, salon hatsaran-tarehy sns.
Laser estetika Co2, Fanesorana volo Shr Opt Ipl, Co2 Laser Laser miato, fanesorana ny holatra, Shr Ipl Opt, Masinina mpanentana hozatra Ems,